Wararka Xanta Suuqa Kala Iisbiga Iyo Wargeysyada Yurub Ee Maanta: Pep Guardiola Oo Xaqiijiyay Bixitaanka Eric Garcia Iyo Qodobo Kale
HomeWararka Ciyaaraha MaantaWararka Xanta Suuqa kala iisbiga iyo Wargeysyada Yurub ee maanta: Pep Guardiola oo Xaqiijiyay bixitaanka Eric Garcia iyo Qodobo kale
January 25, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Suuqa kala iibsiga, Wararka Wargeysyada 0
Pep Guardiola wuxuu rajeynayaa inuu Eric Garcia ka tago Manchester City isla markaana uu ku biiro Barcelona, ​​isagoo sheegay inuu “aad u hubo” bixitaanka daafaca. (Skysport)
Manchester United ayaa isha ku heysa xaalada Ousmane Dembele ee kooxda Barcelona madaama uu galay 18-kii bilood ee ugu dambeysay qandaraaskiisa. (GiveSporT)
Kooxda Arsenal ayaa heshiis lacageed la gaadhay kooxda Real Madrid si ay amaah ugala soo wareegto xiddiga khadka dhexe ee Martin Odegaard sida ay sheegayaan wararku. 22 jirkaan ayaa bartilmaameed u noqday Gunners horaantii isbuucaan, waxaana uu haatan u muuqdaa mid la xaqiijin doono inuu yahay saxiixii ugu dambeeyay ee kooxda. (Express)
FC Barcelona ayaa lala xiriirinayaa inay si bilaash ah kula soo wareegi karto daafaca haatan ee Paris Saint-Germain Juan Bernat, sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday wargeyska Isbaanishka ah ee (Mundo Deportivo) .
Jose Mourinho ayaa sheegay in Gareth Bale ay tahay inuu waqti la qaato Tottenham sida ciyaartoy kasta oo kale; Bale ayaan wali dib u helin qaab ciyaareedkiisii ​​ugu fiicnaa ka dib markii uu amaah hal xilli ciyaareed ah ugu soo laabtay Spurs (Skysports)
West Bromwich Albion ayaa lagu soo waramayaa inay xiiseyneyso inay heshiis amaah ah kula soo saxiixato Jesse Lingard oo ka tirsan kooxda Manchester United isbuuca ugu dambeeya suuqa kala iibsiga bisha Janaayo. (birminghammail)
Liverpool ayaa la filayaa inay dhameystirto saxiixeedii seddexaad ee da ‘yar xagaaga iyadoo da’ yarka Derby County Kaide Gordon lagu wado inuu saxiixo heshiis ku kacaya 3 milyan. (thisisanfield)
Real Madrid ayaa qorsheyneysa inay soo bandhigto dalab dhan 45m si ay dib ugula soo saxiixato xiddigeedii hore xagaagan Sergio Reguilon. (caughtoffside)
Xiddiga qadka dhexe ee kooxda Paris Saint-Germain Julian Draxler ayaa sii wada inuu kasbado xiisaha badan ka hor inta uusan xirmin suuqa xorta ee xagaaga soo socda. Haatan, kooxda ka ciyaarta Bundesliga ee Hertha Berlin waa kooxdii ugu dambeysay ee ku soo biirta xiisaha Draxler ee dhawaan la filayo inuu baxo. (PSGTalk)